HW series outdoor ups & HD series line interactive power supply for sale
Aerospace Baykee (ဂွမ်ဒေါင်း) နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
Containerized Hybrid ကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်က 10kw ~ 400kw
MPPT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Charge Controller ကို
solar panel ကနှင့်ဆက်စပ်
CT Medical Devices များအတွက် BAYKEE 120kVA အွန်လိုင်း UPS
CHP3000 စီးရီးနှစ်ဆပြောင်းလဲခြင်းအွန်လိုင်း ups 3/3 အဆင့်
MP1100 စီးရီး 1/1 အွန်လိုင်း UPS 1kVA-30kVA
MP31 စီးရီး 3/1 အဆင့်မပြတ်မတောက်ပါဝါအရင်းအမြစ်
HW စီးရီးပြင်ပတွင် ups & HD ကိုစီးရီးလိုင်းအပြန်အလှန် power supply
HS / HTS စီးရီးစင်ကြယ်သော sine လှိုင်းအင်ဗာတာ 3/1 အဆင့် ups
Monocrystalline နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို 310w ~ 335w
ဘက်ထရီ baykeeupssolar နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများ စွမ်းရည်မြင့် Offline UPS မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် UPS စနစ် စက်မှု UPS ထုတ်လုပ်သူများ စက်မှု UPS ပါဝါအရင်းအမြစ် Modular UPS ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပေးသွင်း Modular UPS စနစ် အွန်လိုင်း UPS ခေါင်မိုးပေါ်ရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်ကုန်ကျစရိတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဗာတာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်ကအရွယ်အစား Transformer-based အွန်လိုင်း UPS လျှပ်စစ်မီးမရရှိနိုင်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု (ယူပီအက်စ်) ယူပီအက်စ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန် UPS အရေးပေါ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု ကွန်ပျူတာအတွက် UPS UPS Power Supply ထုတ်လုပ်သူများ UPS စနစ်များ
တပ်ဆင်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ, Aerospace BAYKEE Online UPS ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
Aerospace BAYKEE SI စီးရီးသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့်ဇယားကွက်ပြောင်းပြောင်းပါ
ဆယ်နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းပါ! Aerospace BAYKEE သည်အသိဉာဏ်ရှိသောအမျိုးသားအားကစားကွင်းတည်ဆောက်ရန်ကော့စတာရီကိုကူညီသည်.
HTT-P စီးရီးမျိုးဆက်သစ်အသိဥာဏ်ရှိသည့် module မြင့်သောကြိမ်နှုန်းအွန်လိုင်း UPS
Aerospace BAYKEE Online Outdoors UPS ၏အားသာချက်
Aerospace BAYKEE Online UPS power supply ကိုအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများ
ဟူဘိုင်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်ဗျူရိုနှင့် Aerospace Baykee တို့သည်အခြေခံစံနှုန်းကိုဖန်တီးသည် “စမတ်တရားမျှတမှု”
သြဂုတ်လ 2020 (1)
ဇူလိုင်လ 2020 (1)
ဇွန် 2020 (1)
မေလ 2020 (2)
ပြီလ 2020 (16)
မတ်လ 2020 (16)
ဇန်နဝါရီလ 2020 (4)
ဒီဇင်ဘာ 2019 (50)
ဇူလိုင်လ 2019 (7)
ဇွန် 2019 (9)
ပြီလ 2019 (7)
မတ်လ 2019 (2)
ဖုန်း: +86 15999937768
လိပ်စာ: 1၈ လွှာအထိ, အဆောက်အ ဦး 4, zhangcha ပထမ ဦး ဆုံးလမ်း, chancheng ခရိုင်, ဖoshanမြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
HW စီးရီးပြင်ပတွင် ups (1kva to 3kva)
HW series ups isasmart multifunctional line interactive ups, consisting of inverters, automatic voltage regulator, conversion circuit, main control circuit and display alarm circuits, စသည်တို့. This type of outdoor ups used for the outdoor communication data base, railway, lighting system and some tunnel lighting backup system. The cabinet is IP65, Waterproof and dustproof, have longer using life.
HW စီးရီးပြင်ပတွင် ups (1kva to 3kva) advantage
Two type for choose: battery included/ battery excluded, different backup time can be Configured
အီးမေးလ်ပို့ပါ ယခုဆက်သွယ်ပါ PDF အနေဖြင့်ရယူပါ
1. Advanced digital electric system super stable operation
2.Battery intelligent management, durable and free from worry.
3. Intelligent detection system whole protection
4. snmp card, RS232 and RS485 communicate port really realize multi-purpose communication and remote monitoring;
5. Adopt high precision SMD technique, whole machine highly precision
6. Basic on six generation IGBT and high speed static switch transform technique, high reliability.
7. အကာအကွယ်များစွာ, Optional input harmonic filter
2.Outdoor communication base station
မော်ဒယ် HW-1K HW-2K HW-3K 10k~20k
Nominal Capacity 1KVA/0.8KW 2KVA./1.6KW 3KVA/2.4KW 20kva/16kw
Working WAVE Low frequency, Double conversion, pure sine wave online
Phase Single phase L+N+G Three phase
Input Power factor >0.90
Rectifier Input voltage 220Vac; 230Vac; 240Vac( option 110Vac,120Vac, ) 380/400/415v
Range ± ၂၅%
Input frequency 50Hz±10%; 60Hz±10%;
Input THD <2%
Soft startup 0～100% 5sec
Charge Charge mode constant current to constant voltage, with temp compensation; with Auto change
Float voltage 55VDC
Temp. compensation 3mV/ 1 pcs
Charge current 6Amp ( option 10Amp)
ဘက်ထရီ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား maintenance-free lead acid battery
ဘက်ထရီစွမ်းရည် 7～999AH settable (according to the capacity)
Battery number 4pcs 12V as 1pcs battery bank 32pcs 12v
Inverter Phase 1 အဆင့် 3အဆင့်
Rated capacity Rated capacity ×0.8
output ကိုဗို့အား 220Vac; 230Vac; 240Vac ( option 110Vac,120Vac, ) 380/400/415v
Output voltage distortion ±1 %( Stable load); ±3%( fluctuant load)
Freq distortion 50Hz 60Hz<±0.5%
Output THD Sine လှိုင်း ,linear load<3%;non-linear load<5%
Dynamic characteristic Instant voltage<±5%(from0to100% ), Instant recover time<10MP11
Imbalance load voltage output ကိုဗို့အား <±5%
Overload protection 125% 10min; 150% 1min ; 200% 1S
Efficiency >93%(full load)
Bypass အဆင့် Single phase+N Three phase+N
Voltage 220Vac; 230Vac; 240Vac ( option 110Vac,120Vac, )
Transfer time <1MP11( static switch with0S )
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Input protection Input over/low voltage ;over frequency
Output protection Over current short circuit ; factor low
Battery protection Over charge ; over-discharge
Temp protection Environment over temp protection, inverter over temp protection
Hardware failure Assistant power abnormal, breaker cut off, breaker overload, power components over current/over voltage etc protection
Cooling COMPULSIVE VENTILATION(with temperature control)
Communication RS232/ RS485; (optional SNMP card)
Safety rate IP43
Physical parameter Noise (dB) 45~50
Size (W*D*H)မီလီမီတာ 890*640*1250 (မက်စ်. Built-in 8 pcs 12V100Ah batteries), Usually according to battery quantity
အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) without putting the batteries 105 115 135 304
The production and package of HW series outdoor ups.
က: ကျနော်တို့ကတရုတ် ဦး ဆောင် ups ဖြစ်ကြသည်&နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ထုတ်လုပ်သူ, 11 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်
ယူပီအက်စ် & နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်ကုန်.
100% တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ QC စစ်ဆေးခြင်း.
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး & ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု.
ကောင်းသောပြီးနောက်ရောင်းချမှု:2နှစ်အာမခံချက်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် site ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်, ISO9001, ISO14001, OHSAS18000, TLC authentication ကို, နှင့်တရုတ်
Market ကဖုံးလွှမ်း 100 လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများ. ပါကစ္စတန်မှာဌာနခွဲရုံးရှိတယ်, သြစတြေးလျ, စသည်တို့.
သင့်တွင်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါက FEPS စီးရီးအရေးပေါ် power supply , သို့မဟုတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက3အဆင့် ups,3 အဆင့် ups စနစ်,480 ဗို့3အဆင့် ups,3 အဆင့် ups စျေးနှုန်း,3 အဆင့် ups သတ်မှတ်ချက်,စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
အမှတ်အသားများ (Tags)：3 အဆင့် ups စနစ်, Modular UPS ကို, Online UPS system manufacturer & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, Ups ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်းသူ, UPS power supply ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
HTT စီးရီးအမြင့်ကြိမ်နှုန်းအွန်လိုင်း 3/3 အဆင့် UPS— 10KVA မှ 80KVA မှ Power Range
HTT-Pro စီးရီးအလားတူ - modular အမြင့်ကြိမ်နှုန်းအွန်လိုင်း UPS
BKH စီးရီးမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည် modular ups
Aerospace Baykee (ဂွမ်ဒေါင်း) နည်းပညာကုမ္ပဏီ, Ltd.(ယခင်အမည် Foshan Baykee စွမ်းအင်နည်းပညာကုမ္ပဏီသစ်ကုမ္ပဏီ)(နောင်တွင်“ Aerospace Baykee” ဟုအတိုချုံးထားသည်။) သူသည် Beijing Aerospace Changfeng Co. ၏လက်အောက်ခံလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သည်။, Ltd. (စတော့ရှယ်ယာကုဒ် 600855). Beijing Aerospace Changfeng Co., Ltd. AS“ ASCF” အဖြစ်အတိုကောက်） သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
အမြန်လင့်ခ်များ ဆက်သွယ်ရန် အကြောင်း ထုတ်ကုန် စီမံကိန်း သတင်းများ
ထုတ်ကုန်များ PV နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသစ်
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် : ဖီးနစ် တယ်လီ : +86 15999937768 အီးမေးလ် : power@baykee.net လိပ်စာ : 1၈ လွှာအထိ, အဆောက်အ ဦး 4, zhangcha ပထမ ဦး ဆုံးလမ်း, chancheng ခရိုင်, ဖoshanမြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
Aerospace Baykee (ဂွမ်ဒေါင်း) နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်© 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
UPS & SOLAR PV SYSTEM ထောက်ပံ့သူ
ရှိပြီးသား 1 902 မက်ဆေ့ခ်ျများ
ဖီးနစ်	10:12 နံနက်, ဒီနေ့
ဟယ်လို, ချစ်လှစွာသောဆရာ / Madam, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြိုဆိုပါသည်! ငါဖီးနစ်ပေါ့,ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ?